Qudus: Trump oo u digay dalalka uu deeqda siiyo | Saxil News Network
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku goodiyay in uu deeqaha ka jaran doono dalalka taageeray qaraarkii Qaramada Midoobay ee lagaga soo horjeedsaday in uu Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa’iil.
Bishan horraanteedii ayuu Trump gaaray go’aankaas iyadoo caalaamka aad looga dhaliilay.
“Waxay naga qaataan boqolaal milyan oo doolar iyo xataa balaayiin doolar haddana codkooda ayay nagu mucaaradayaan,” ayuu u sheegay saxafiyiinta.
“codkooda hanagu mucaaradaan, lacag badan baa anagana noo baaqan doonta.”
Haddalkiisan ayaa yimid ka hor codaynta loo qaadayo qaraarka ka dhanka ah in Qudus loo aqoonsado caasimadda Israa’iil ee uu qabanayo Golaha loo dhan yahay ee Qarammada Midoobay.
Qaraarkan qabyada ah ma xusayo Maraykan balse wuxuu leeyahay go’aankaste oo Qudus ku saabsan waa in meesha laga saaro.
Image captionAfar iyo toban dal oo Gollaha Ammaanka ka tirsan ayaa qaraarkan oo kale isku raacay Isniintii
Dhanka Washington hadii laga fiiriyo arrinta in Qudus loo aqoonsado caasimadda Israa’iil ayna go’aansadaan in ay safaaraddooda u wareejistaan halkaas waxay u arkaan xaq ay u madax bannaan yihiin.
Madaxwayne Putin oo ka digey go’aankii Trump ee Qudus
Dublamaasi sare ayaana ii sheegay in ay caddahay in Maraykanka ay ka go’antahay in uu Israa’iil ku garab istaago Qaramada Midoobay, laakiin uu ka shakisan yahay in Washington ay gargaarka ka jari doonto Masar oo soo dhigtay qaraarkii Gollaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo dhicisoobay kaas oo ku qotama midkan Golaha loo dhan yahayna.
Waxayna u badan tahay in Gollaha Loo dhan uu isku dhan ka mari doono Maraykanka Khamiista, iyadoo caalamka intiisa kale uu Trump u sheegi doono in uusan la qabin go’aanka uu Qudus ka qaatay.
Arrinta Qudus ayaana ah xudunta mashaakilka dhex yaalla Falastiiniyiinta iyo Israa’iil.
Israa’iil ayaa qabsatay bariga magaalada Qudus oo ay markii hore haysatay Urdun ka dib markii uu dhacay dagaalkii Bariga Dhexe sannadkii 1967dii, waxayna u arkeen in ay tahay caasimaddooda aan lakala qaybin karin.